China46m ဥယျာဉ် Lamps China Manufacturers & Suppliers & Factory
4 6m ဥယျာဉ် Lamps - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 17 များအတွက်စုစုပေါင်း46m ဥယျာဉ် Lamps ထုတ်ကုန်များ)
ဥရောပဥယျာဉ်ကိုမီးခွက်, ခေတ်မီဥယျာဉ်ကိုမီးခွက်နဲ့ဂန္ဥယျာဉ်ကိုမီးခွက်: ဥယျာဉ်ကိုမီးခွက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတည်းကကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသုံးအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်သောကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ဒီဇိုင်းစတိုင်များအတိုင်းဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။...
ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်အဓိကအားဖြင့်မြို့ပြလမ်းများ, လူနေအိမ်လမ်းများ, စက်မှုဥယျာဉ်, ရှုခင်းအလင်းရောင်, ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု, ပန်းခြံများ, ဥယျာဉ်, အစိမ်းခါးပတ်, စတုရန်းအလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်အလှဆင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပို. ပို. အသိုင်းအဝိုင်း,...
ဒီဥယျာဉ်ကိုဆီမီးခွက်၏အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်တက်ကြွသင်္ကေတဖြစ်သော blooming ပန်းပွင့်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသည်။ ဝင်းအလင်းအိမ်အဓိကအားဖြင့်လူလှပသောလေးမွတျတနျဖိုးပေးရမသာ, သာယာလှပအစက်အပြောက်နဲ့ high-end လူနေအိမ်အလှဆင်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ဒါ့အပြင်ညအချိန်တွင်ယက်ပဲလားအလင်းအိမ်ရှိပါတယ်။...
LED ကိုဥယျာဉ် Lamps
LED ကိုဥယျာဉ်မီးအိမ်ပြင်ပအလင်းရောင်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသည်အလင်းကိုအရင်းအမြစ်တစ်ခုတောက်ပခန္ဓာကိုယ်အဖြစ် LED ဆီမီးကွန်ဒတ်တာအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်ပြင်ပလမ်းအလင်းရောင်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်6မီတာ, အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည်: LED...
4 6m ဥယျာဉ် Lamps 4-6m ဥယျာဉ် Lamps Chinoiserie ဥယျာဉ် Lamps ရှုခင်း Lamps ပန်းခြံဥယျာဉ် Lamps